Tsy afaka mamaha ny olana eto amin'izao tontolo izao isika amin'ny alàlan'ny fisainana sy ny firesahana, fa amin'izany fomba izany: Martin Vrijland
Tsy afaka mamaha ny olana eto amin'izao tontolo izao isika amin'ny alàlan'ny fisainana sy ny firesahana, fa amin'izany fomba izany:
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 21 June 2019	• 3 Comments
Talohan'izay dia niresaka momba ny horonan-tsary avy amin'i Roald Boom aho, izay tsy fantatro akory, fa nijery lahatsary YouTube talohan'ny 1x. Ao amin'ny kabary etsy ambany (izay azoko), Roald dia manakaiky ny maha-zava-dehibe ny tsiroko. Nilaza izy fa 'Tsy afaka mamaha olana amin'ny fomba fisainana mitovy isika"tokony hovaina amin'ny"Tsy afaka mamaha olana iray avy amin'ny haavon'ny fahatsiarovan-tena isika. Maneho amin'ny fomba tena tsara sy mazava izy izay nanandrana nanazava ny lahatsoratra navoakako tato ho ato, izay voalohany miezaka mamoha ny mpamaky avy amin'ny hypnose haino aman-jery miaraka aminy ary avy eo manao ny fihenan-dàlana mankany amin'ny tena fahatsiarovan-tena. Izany no antony tiako hampiasa ny lahatsariny eto, izay tiako homena fanampim-panazavàna, mba hanantena tanteraka ny sary.
Aiza no misy izao tontolo izao sy ny fisiantsika?
Ho an'ny fahatakarana tsara dia ilainy aloha ny manavaka ny maha-isika antsika. Mangataka anao aho hametraka ny finoanao mandritra ny fotoana fohy ao amin'ny efitrano fiandrasana fanandramana eritreritra. Azonao atao ny mino ny andriamanitra famoronana iray na tsaho lehibe. Misy fahamarinana ao amin'ny roa tonta. Voalohany, andao isika haka ny hevitry ny fisainana; ho an'ny fampihorohoroana, mba hahafahako miverina any amin'ny rafi-pinoana 'famoronana' na 'big bang'. Andeha hojerentsika fa ny fiandohan'ny zavatra rehetra dia ny drafitry ny fampahalalam-baovao izay nametrahana ny zava-drehetra ary ny fitohizan'ny fampidirana manontolo ny fampahalalam-baovao no fototry ny fifanarahana. Aoka ho lazaina fa karazana ranomasimben'ny fahafaha-manao rehetra sy ny zava-bitany izay ahitana ny zava-drehetra avy amin'ny raharaha amin'ny angovo, ny famolavolana sy ny tsy fahampiana. Ny karazana sela misy ny zavamananaina, izao tontolo izao ary ny zava-drehetra. Io fampitahana amin'ny sela io dia angamba ny tsara indrindra, satria ahoana no ahafahan'io sela io ao amin'ny vatan'ny olombelona koa ny fampahalalana ny ampahany amin'ny vatany. Izany no antsoin'i Roald Boom ao amin'ny lahatsary eto ambany ny sombin-tany, te hifandray amin'io fiteny io aho. Tsarovy ity fampitahorana sela ity rehefa mijery ilay video ianao.
Famoronana sa tsia?
Raha mihevitra isika fa fotoana vitsy monja avy amin'ny fisian'ny sela misy ny fisianisma (izaho dia miantso azy tsy hoe izao tontolo izao, izay mbola misy), dia mbola ny fanontaniana manan-danja dia: "ahoana no nitrangan'ny sela?" Noho izany: "ahoana no nahatonga ny tontolon'ny angon-drakitra rehetra (ny faritra quantum) avy aiza no niforona ny zava-drehetra?"
Ao amin'ny modely voatanisa eto (ny fanandramana eritreritra) dia mieritreritra aho mandritra ny fotoana iray izay niforonan'ny singa tsirairay (sela). Ny sehatry ny angovo tsirairay izay manana ny ilàna hanome endrika bebe kokoa. Ny finoana dia mifanaraka amin'ny fahamarinana, satria eto koa ny andriamanitra, anjely ary demony (sehatry ny angovo, endriny, singa). Noho ny fandeferana, antsoy hoe 'cellules' na 'mpanamboatra' tsirairay izany. Manao fitiliana lehibe aho eto, fa raha mihevitra isika fa izany avy amin'ny 'zavatra rehetra' (ny 'loharanom-baovaon-drakitra rehetra', ny 'sehatry ny angovo azo avy amin'ny loharanom-baomiera' na ny 'loharanom-baovao', ny 'faritra quantum') ny endriny, ny fampitahàna tsara indrindra azontsika amin'izany ao amin'ny tontolontsika eto ambonin'ny tany dia ny cellule stamme.
Ny faniriana hamolavola ny fehezan-dalàna rehetra ao anaty sela misy tsiranoka dia zavatra tsy azontsika ahitana, saingy mitranga izany. Ny cellules dia manomboka ny fizotry ny fikirakirana amin'ny fampahalalana avy amin'ny sela. Noho izany, afaka milaza isika fa ny loharanon'ny fampahalalam-baovao dia manondro ny fironana (mamorona). Io fitohizan'ny fampahalalam-baovao rehetra io dia mety ho fototry ny fisiantsika. Ny isam-batan'olona na ny vondrona (farafaharatsiny: izay antsointsika amin'ny tontolontsika miseho) dia vokatr'izany fanodikodinam-baovao izany. Ireo dia efa lasa endrika. Ireo no "cellules" fantatra ankehitriny izay miforona avy amin'ny fampahalalam-baovao ao amin'ny sela.
Mba hamaliana ny fanontaniana raha miaina ao anatin'ny zavaboary isika na eo amin'ny tontolo iray izay miforona amin'ny evolisiona, avy amin'ny tebiteby lehibe dia tsy maintsy jerentsika ny fizika physique. Ny fanandramana roa avy amin'ny mpahay siansa Niels Bohr dia naneso ny asan'i Einstein tamin'ny "Theory Of Everything" (TOE) amin'ny fototra. Na dia nanala tanteraka ny hevitr'i Einstein aza izy (toy ny teoria amin'ny toerana sy ny haavon'ny hazavana toy ny sisintany noho ny fitsapana trangam-panodinana). Niels Bohr dia nampiseho ny fanandramana indroa fa ilaina ny mpandinika mba hamoronana zavatra. Talohan'izany, sehatra fampahalalam-baovao fotsiny izany. Izany dia mitarika amin'ny fehin-kevitra hoe miaina anaty zava-misy marina isika (izay tsy midika hoe "fombafomba marina"), ka ny antoko ivelany dia mpilalao mahatsiaro (ao amin'ny simulation multiplayer). Ny famelabelarana goavana amin'ity famaranana ity dia hita ao amin'ity andian-dahatsoratra ity (jereo eto en eto).
Amin'izao fotoana izao, raha toa ka avy amin'ny fampidirana ny fampahalalam-baovao (izay antsoin'i Roald Boom hoe "ny saha voafetra"), dia azontsika antsoina hoe "form" ny sela kreôl izay nanombohana indray ny dingan'ny fahariana (toy ny amin'ny vatana sy taova). Noho izany dia afaka milaza isika fa ity iray ity form entities mamorona ny fahatsiarovantsika. Taorian 'ny tsipika momba ny angon-drakitra tsy misy endriny (ny selan' ny fisian 'ny fisian' ny fisian 'ny tany), dia nisy ny' form '. Azontsika atao ny miantso io 'form' voalohany 'fahatsiarovan-tena' na 'fanahy' na 'entity'. Ireo teny rehetra ireo dia voaloton'ny hetsika ara-panahy sy ara-pinoana, saingy avelao ny hisafidy 'fahatsiarovan-tena' fotsiny mba hahazoana fahafaham-po endrika izay namorona. Noho izany aloha dia nisy ny 'zavatra rehetra' ary avy eo ny fahatsiarovan-tena. Ny fahatsiarovan-tena dia endrika noforonina avy ao amin'ny sela. Na izany aza dia samy iray ny iray satria ny iray dia vokatry ny iray hafa, saingy tsy afaka mamorona ny sela raha tsy misy ny angona angona azo avy amin'ny sela. Samy miara-miasa avokoa izy roa ireo.
Amin'ity vola amin'ny alina ity dia hampivelatra ny filàna (ny fahatsiarovantena / ny endrika) mba hanome endrika bebe kokoa (hanamboarana taova). Ankehitriny dia fantatsika avy amin'ny zava-misy ara-biôlôjika 'biolojika' izay mety mahatonga ny sela malemy koa. Raha mijery ny vatan'olombelona isika dia tsy tonga lafatra fa tsy marary isika. Na izany aza, ny virus ihany koa dia mety ho fitsapana ny rafitra ary hampitombo ny fanoherana.
Eo am-pandinihana ny saintsika dia andao isika haka fotoana iray fa ny masontsika dia natsangana mivantana avy amin'ny loharanom-baovaon-doha (ny sela misy ny sela / quantum) ary noho izany dia samy avy amin'ny mitovy daholo isika rehetra, fa samy manana iraka samihafa avokoa. Raha ny marina, ny cellule iray dia nahazo ny fonosana fototra avy amin'ny sela misy sela mba hamorona vondrona iray ary ny iray hafa dia rantsana iray. Noho izany dia mitovy amin'ny laharam-pahamehana isika, saingy tsy mitovy, satria manana iraka hafa an-tsoratra isika.
Raha nianatra ny lahatsoratra momba ny simulation ianao dia te hanasongadina fa tahaka ny maha-singa iray (endrika endrika fahatsiarovan-tena) tahaka ny hoe manana ny asan'ny fananganana rafitra virosy. Ny karazana fitsapana ho an'ny vatana manontolo izay niforona tao amin'ny sela. Ity endri-tsoratry ny fanentanana Luciferiana ity dia nanamboatra simia (viriosy). Raha ny marina, ny fizotry ny physique dia maneho fa "miaina" isika ao anaty simulation (mahita / milalao). Amin'io tranga io, i Losifera no andriamanitra (mpanamboatra) ity simulation ity. Izany dia manazava ny tantara momba ny famoronana sy ny teorian'ny teoria lehibe. Amin'ny tranga goavana dia azonao atao ny milaza fa io no fotoana nipoitra ny simulation. "Poof!" Tampoka teo dia nisy ny zavatra rehetra. Ny Tantaran'ny Famoronana dia mamaritra ny sarin-javatra izay mamorona ny simulation (aloha ny hazavana sy ny haizina, avy eo ny lanitra, ny tany, ny tany, ny ranomasina ary ny sisa). Ny teoria momba ny evolisiona dia azo oharina amin'ny Sims izay ao amin'ny tontolon'izy ireo Sims (jereo eto) mikaroka ny fiandohan'ny fisiany ary miezaka ny manao fikarohana ara-tantara avy amin'ny fahatsiarovan-dry Sims sy ny fahatsapany.
Raha mandalina ny lahatsoratrao ianao, dia ho hitanao fa ao anaty varavarana isika ny endrika fahatsiarovan-tena (izay nomem-boninahitra ho "andriamanitra" avy amin'ny zavamisy Sims ary azo lazaina amin'ny hoe) Losifera nanangana fiainana simuliran'ny virosy. Azonao atao koa ny miantso azy io ho rafitra fitsapana; rafitra viriosy izay natao hanandramana ny endrika fahatsiarovan-tena hafa (cell). Azontsika atao ny mamantatra fa tsy ny fanandramana ara-pitsaboana fotsiny no mahatonga azy io ho rafitra fitsaboana virtoaly, fa koa ny script sy ny duality. Manazava izany aho ity lahatsoratra manan-danja ity (Tena manoro hevitra anao aho hamaky ity lahatsoratra ity amim-pitandremana).
Ny rindran-tsakafon'ny ankapobeny, ny sehatra quantum
Ny Roald Boom dia miantso io rindran-kaontim-pampahalalam-baovao rehetra io (izay nampitahaintsika tamin'ny tranokely iray ho mora ampiasaina) ny sehatra quantum. Noho izany rehefa tonga ny saha voafetra dia ny singa manokana. Ahitana ny teny hoe 'tokana' izany, izay midika hoe 'olona'. Raha mijery ny cellule stamme isika ary ny fomba fiasan'ny sela miavaka amin'ny asa samihafa amin'ny vatana na amin'ny endriny biolojika dia izy ireo dia endrika manokana; Ny singa tsirairay izay niforona avy amin'ny saha voafetra (ny fampidirana ny tsimok'aretin'ny sela). Amin'io ambaratonga io dia tsy mitovy intsony ny iray. Ny iray dia manana iraka fananganana hafa tahaka ilay iray hafa. Raha toa ny rafitra viriosy amin'ny simulation nataon'ilay orinasa Losifera dia natao hijerena ireo sela hafa noho ny heriny, dia afaka mahita ilay code amin'ny sehatra quantum izay mety hiteraka virosy.
Raha ny zava-drehetra, isika rehetra dia avy amin 'io rindran-tserasera rehetra io (ny sehatra quantum / ny loharanom-baovao). Noho izany raha manandrana mamaha ny olan'ny sims simulation avy amin'ny traikefa Sims na ny traikefa avatar isika, dia manova ny lalao avy any anatiny. Tsy azo atao izany. Ny mpanamboatra ny simulation dia ho voamarina fa ny 'programa' no nandresy. Ny eritreritrao sy ny atidohanao dia ampahany amin'ny Simanao ao amin'ny lalao; ny sarinao amin'ny simulation; ny fahitanao ny vatanao. Tsy ny vatanao no anao: ianao no mahatsiaro (ny endrika miavaka izay nivoaka avy amin'ny fampahalalam-baovao). Ny fomba tokana hanitsiana na hanakanana ny simulation dia ny manao izany amin'ny faran'ny programa. Izany dia mitranga ao amin'ny singa manokana (singa / singa tokana), izay mitovy ny endrika enti-milaza rehetra fa manana iraka hafa. Avy amin'io toerana io no ahafahantsika mivezivezy amin'ny filazam-baovao fototra.
Ny fanaraha-maso ny viriosy amin'ny fahatsiarovan-tsaina
Azonao atao ihany koa ny milaza fa tsy mila manahy momba ireo olana atrehan'ity simulation ity isika, raha tsy ny fikasan'ny rafitra virtoaly: handresena sy hanamboatra izany. Ny vatanao koa dia afaka miaina amin'ny fanafihana virosy. Ny endrikao fahatsiarovanao (fanahy na izay tianao hiantso azy io) dia mety ho tafavoaka velona amin'ny fanafihana virosy. Na izany aza, mieritreritra isika fa tokony hanao izany ao amin'ny avatar Sims. izay ny mitovy Na izany aza, dia izy io ihany koa ny Sims. Anisan'izany simulation virus izany. Ny fandresena ny rafitra viriosy dia ny fanafihana ny sela virosy. Tsy avy any anaty, fa avy any ivelany. Ny vondrona Losifera, izay manana ny asany mba hitsapana ny endrika hafa ny fahatsiarovan-tena noho ny heriny sy ny fanorenana ity virosy ity, dia tsy maintsy atao amin'izay ataony. Izany dia mitranga eo amin'ny ambaran'ny fahatsiarovan-tena.
Raha milaza i Roald Boom fa samy manana ny endriny rehetra, dia tena marina izany. Apetraho ao amin'ny sarin'ny lalao Playstation na ilay lalao Sims voalaza etsy ambony. Andeha hojerentsika fa ireo karazana feon'ny fieritreretana (fanahy na izay tianao hiantso azy io) dia voasariky ny rafitra viriosy Losifera. Iza no mpilalao sarimihetsika toy izany? Iza moa ireo mpilalao amin'ny Playstation na Sims mpilalao sarimihetsika. Ireo no olona mijery ny efijery amin'ny mpandrindra eo amin'ny farafara. Noho izany, ny fahatsiarovanao dia miseho ary milalao amin'ity rafi-pitilanana ity, fa avy eo amin'ny sehatra fifangaroan'ny sela ihany koa. Mbola ao anaty fahatsiarovan-tena foana ianao ary mbola ao anaty saha. Ny fototry ny vahaolana amin'ny zava-drehetra dia mitoetra ao amin'ny sehatra quantum.
Mba hampiasana azy io bebe kokoa, mety misy sary manaraka toy izao: Raha manao typo eo amin'ny efijery ianao, mametraka typex eo amin'ny efijery, manangona lasitra, ary miezaka mamafa ireo taratasy eo amin'ny screen ou na manova izany amin'ny teny processeur? Noho izany dia tsy maintsy mahita ny vahaolana amin'ny sehatra quantum isika. Izany no mahatonga ahy mieritreritra fa tena zava-dehibe ny lahatsary eto ambany ny Roald Boom.
Ny fampiasana ny teny hoe "singalalaina" dia noraisin'ny fitondran'ny transhumanism ary ampirisihan'ny olona toy ny lehiben'ny teknika Google Ray Kurzweil. Ity no lozan'ny rafitra fiovan'ny viriosy momba ny viriosy momba ny virosy, izay ahafahana miverina amin'ny endriny manokana amin'ny alàlan'ny lalan-kery amin'ny virosy. Izany rehetra izany dia tsy maintsy mamakivaky ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny AI sy ny fanovàna tsikelin'ny avatar ao amin'ny cyborg ho an'ny cyborg izay tsy maintsy miafara amin'ny rahona miaraka amin'ny ADN sy ny atidoha. Ny fampitandremako dia noho izany tsy tokony hifanerasera amin'ity fanovàna ity sy ny tsy firaharahiana ity isika, na amin'ny fivavahana, satria mampifandray ny rafitra viriosy momba ny viriosy izay te-hikolokolo ao amin'ny sehatra quantum. Azontsika atao ny manafoana ity rafi-pamokarana Rosiana ity avy amin'ny haavon'ny fahatsiarovan-tena, ny singa madio sy ny saha voafetra. Ny torohevitro dia mitovy amin'ny an'i Roald Boom: aoka ho toy ny mahazatra ary tadidio ny endrikao fahatsiarovanao.
Marihiko ihany koa fa ny 'universe' dia ampahany amin'ny traikefa momba ny simulation (toy ny anjely, demony na jinns voalaza etsy ambony: jereo eto), fa raha tsy izany dia tiako ny fanazavan'i Roald.
Ho an'ny mpamaky maro, ny teny etsy ambony dia mety ho fiteny tsy misy dikany. Ho an'ireo fanahy miaina, mety ho lavo ilay penny.
The hypothesis simulation hacked
Raha tanteraka ny faminaniana dia porofon'ny fahamarinanao ve ny finoanao?
Iza no namorona an'i Losifera ary inona ireo demony, jinns na archon tao amin'ny modelim-simulation?
Ny fanitsakitsahana tantara maloto dia mampiseho fa manatrika ny fandaharam-potoanan'i Losifera isika
Tags: fanentanana, ny fahatsiarovan-tena, boom, ny mitovy, denkniveu, Featured, -tsaina, quantum field, Losifera, niveau, big bang, fivavahana, Roald, Roald Boom, zavaboary, simulation, singularity, Video, ihany
21 June 2019 ao amin'ny 16: 32
Ny mpilalao lehibe eran-tany amin'ity fandaharanasa ity dia i Kurzweil, fa koa Eric Schmidt (Alphabet) sy Peter Thiel. Asehoy ny mombamomba anao ...
Mba hahatongavana any amin'ny sisin'ny fahalalan'izao tontolo izao, katsaho ny sainina sarotra sy saro-bidy indrindra, apetraho ao anaty efitrano iray izy ireo ary asio izy ireo hifanontany
22 June 2019 ao amin'ny 15: 02
mahaliana ny salmon, jereo fotsiny izay ahiahiana mahazatra ataon'ny Mengele Plasterk ... Impatient / Mytommorows
Ny programa fanombohana vao haingana 😀 manontany tena hoe firy ny isan'ny fizarana nano nynao
JV nanoratra hoe:
23 June 2019 ao amin'ny 18: 06
Misaotra an'ity ampahibemaso ity, pikantsary iray hafa!
« I Anja Schaap dia maty teo ambonin'ny ranomasina teo ambonin'ny Nosy Wadden, saingy iza no sambo (myshiptracking.com)?
Ny Holandeana dia tsy mahatsapa ny toe-javatra misy azy: ny fanandramana an-tranomaizina Stanford »
Total visits: 10.858.418
ZalmInBlik op Ahoana no fomba hitondrana ny fiovana lehibe raha 99% no tsy mananaina?
Martin Vrijland op Henoy ny fanazavan'i Elon Musk momba ny hoavy tsy ho ela izay ahodinanay ao anaty simulation
Martin Vrijland op Ahoana no fomba hitondrana ny fiovana lehibe raha 99% no tsy mananaina?
Mind Supply op Henoy ny fanazavan'i Elon Musk momba ny hoavy tsy ho ela izay ahodinanay ao anaty simulation
guppy op Ahoana no fomba hitondrana ny fiovana lehibe raha 99% no tsy mananaina?
Mifandraisa anjara amin'ny 1.612 hafa